भारतले जारी गरेको नयाँ नक्शाप्रति मधेसी केन्द्रित दल मौन ! – Globalpatrika
मुख्य पृष्ठसमाचारभारतले जारी गरेको नयाँ नक्शाप्रति मधेसी केन्द्रित दल मौन !
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्शाप्रति मधेसी केन्द्रित दल मौन !
काठमाडौं – भारतले नेपालको भूमिसहित आफ्नो दावी गर्दै नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मधेस केन्द्रित दल राजपा र समाजवादी पार्टी मौन छन्।
मधेस केन्द्रित दलले अहिलेसम्म व्यक्तिगत वा पार्टीको कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। नेपालको संविधान प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले ६ महिना लामो नाकाबन्दी लगाउँदा उक्त नाकाबन्दी आफूले लगाएको दाबी गरेका मधेस केन्द्रित दलले भारतले नेपाली भूमिलाईसमेत समेटेर जारी गरेको नयाँ नश्साप्रति कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।